JIRAMA TOAMASINA : Mametaka kaontera 20 isan’andro ho an’ireo izay nangataka
Efa namoaka ny anaran’ireo mpanjifa vaovaon’ny Jirama Toamasina ireo tompon’andraikitra nanomboka tamin’iny herinandro nivalona iny. 13 mars 2018
Politika entin’ny tale jeneralin’izy ireo sy ny tale iraisam-paritry ny Jirama Toamasina, ny fanomezana amin’izay kaonteran-jiro ho an’ireo efa nangataka izany hatramin’ny taona 2012 hatramin’ny 2014 nefa mbola tsy nahazo ny anjarany.
Raha ny fanazavana nataon’ny talen’ny Jirama Toamasina, Toto Jean de Dieu, dia nanomboka omaly, alatsinainy 12 marsa ny fametrahana kaonteran-jiro vaovao izany. Kaontera 600 isam-bolana izany hoe 20 isan’andro no hapetrak’izy ireo satria miisa 2.500 ireto mpanjifa vaovao efa nahaloa ny vola notakian’ny Jirama ho fahazoany herinaratra. Mba entina handaminana ny fametrahana izany dia nambaran’i Toto Jean de Dieu fa amin’ity volana marsa ity dia ireo fangatahana voaray ny taona 2012, ny volana avrily ny taona 2013, ary ny volana mey sy ny jona dia ireo mpanjifa vaovao ny taona 2014.
Misy anefa ny fandaminana nataon’ny Jirama sy ireo mpanjifa vaovao ireto ary ireo tranom-barotra telo miara-miasa amin’izy ireo, fa ny mpanjifa no miantoka ny kojakoja madinika nefa tena ilaina amin’ny fampidirana ny herinaratra, mba hahazo ireo kalitao tsara hisorohana ny loza sy ny hain-trano no antony, hoy ny Jirama Toamasina.
Ankilan’izay dia hanomboka amin’ity volana marsa ity ihany koa ny fanaraha-maso ataon’ny mpiasan’ny Jirama vita fianianana tamin’ny taona lasa mikasika ny halatra herinaratra, izay tena loza mitatao amin’ny fitaovana efa antitra ny Jirama sy mazana miteraka hain-trano amin’ ireo tokantrano manodidina an’ireo mpangalatra herinaratra. Ireo olona am-polony efa tratra ny taona lasa kosa dia miandry ny raharaha eny amin’ny Fitsarana izy ireo ankehitriny. Ankoatra izay dia miezaka manarina ny tambajotran-jirony izy ireo amin’izao fotoana izao, ka raha 12 ny tambajotra mpamatsy herinaratra ny tanànan’i Toamasina ankehitriny dia hampi- tomboana izany.